1. Malunga neentlobo zolwelo Ukusetyenziswa kolwelo ukusebenzisa umoya oxineneyo, ukusetyenziswa kolunye ulwelo lwesihlandlo kufuneka kuqinisekiswe yinkampani. 2. Isimo samanzi esijiyayo Umoya oxineneyo ngamanzi afinyeziweyo iya kuba ngunobangela wokungasebenzi kakuhle kwezinto zomoya. Ngaphambi kwesihluzo, a ...
1. Iimfuno zekhwalithi yomoya yokusetyenziswa kwesilinda: umoya ococekileyo nowomileyo kufuneka usetyenziswe.Moya awuyi kuba neoyile yokusombulula inyibilikisi, ityuwa, irhasi eyonakalisayo, njl., Ukuthintela isilinda, isenzo esibi phambi kokufakwa. umbhobho wokudibanisa kufuneka uphephethwe ngokupheleleyo kwaye uhlanjwe ...
Qingdao Silinde Industrial Equipment Co., Ltd.unikezelwe kuphando, uphuhliso, imveliso kunye neentengiso YSC brand iprojekthi esizisebenzelayo mveliso kule minyaka idlulileyo. Ngokusokola rhoqo yinkampani yethu kangangeminyaka, iimveliso zeYSC zithengisiwe kulo lonke ihlabathi. Ngomgangatho wayo obalaseleyo ...